musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Flights kubva Nur-Sultan to Bishkek on Air Astana now
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kazakhstan Breaking News • Kyrgyzstan Breaking Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Flights kubva Nur-Sultan to Bishkek on Air Astana now.
Vese vafambi vanoenda kuKyrgyzstan, kusanganisira vagari veRepublic yeKyrgyzstan, vana kubva pamakore matanhatu uye vafambi vanofamba, vanofanirwa kupa chitupa chePCR chine mhedzisiro yakaipa, nebvunzo yakaitwa mukati maawa makumi manomwe nemaviri vasati vasimuka. Vatakuri vakabaiwa zvizere havabvi pane izvi zvinodiwa.
Air Astana kutangisazve ndege dzakananga kuguta guru reKyrgyzstan, Bishkek kutanga muna Mbudzi 17, 2021.
Air Astana ichange ichishandisa Embraer E190-E2 ndege paNur-Sultan, Kazakhstan - Bishkek, Kyrgyzstan nzira.
Nur-Sultan - Ndege dzeBishkek dzichatanga kushanda kaviri pasvondo neChitatu neSvondo.
Air Astana ichatangazve ndege dzakananga kubva kuNur-Sultan kuenda kuguta guru reKyrgyzstan, Bishkek musi wa 17 Mbudzi 2021.
Masevhisi anozotanga kushandiswa uchishandisa Air Astana Embraer E190-E2 ndege kaviri pasvondo neChitatu neSvondo, iine mamwe mafrequency maviri neMuvhuro neChishanu kutanga muna Zvita.
Masevhisi pakati peAlmaty kuenda kuBishkek ari kutoshanda zuva nezuva.
Embraer E190-E2 ndege ine premium hupfumi uye ehupfumi kirasi kabhini kumisikidza, ine premium economy vafambi vari kupihwa pekutanga cheki-mukati uye kukwira, yakawedzerwa mitoro yemvumo, bhizinesi kirasi menyu uye bhizinesi rekugara.